Upper East Side - esinye sezifunda ezibizayo, ezithakazelisayo nezifashisayo eNew York. Ngaphezu kwalokho, uhle kakhulu.
Uphawu lwe-Upper East Side lukwelula kusukela ku-5th Avenue kuya eCentral Park. Emakhasini ezincwadi zokuqondisa kanye nezincwadi zereferensi le ndawo ibizwa ngokuthi i-Museum Mile. Into ewukuthi le patch encane eNew York City inenani elikhulu leminyuziyamu nezemibukiso yobuciko.
Ngenxa yezizathu ezicacile, i-Upper East Side iyabiza kuzo zonke izindawo zokuphila kwayo. Akukhathazi nje kuphela izinto zokuhlala kanye nezentengiselwano ezithengiswayo, kepha nezintengo ezitolo ezinkulu nezindleko zokuhlinzeka ngezinsizakalo zomuntu siqu. Yonke i-5th Avenue imelwe izindlu eziningi, ezithwala amagundane emigwaqo emifula emnyama ehamba ngezindawo zokuhlala.
Ngaphansi kwalezi zingqimba, kulindeleke ukuthi ungene esakhiweni, umnyango wesango nomnyango wendlu bayasebenza emsebenzini wonke amahora, abesebenza ngesikhathi esifanele abaqashi abashiya imoto. Abanikazi abacebile bezindawo zangempela zendawo bangena kumatekisi aphuzi aphuzi, noma ngezimoto zabo. Kulesi simo, ukuxubana kwezimoto ku-5th Avenue cishe akukaze kwenzeke.
I-Upper East Side yindawo yokuhlala yamamyuziyamu. Emigwaqweni yesifunda yiMicrosoft Museum, i-Guggenheim, iMetropolitan nezinye iziboniso eziningi. Izindlu ezinhle kunazo zonke zesifunda zitholakala kuleso sigaba se-5th Avenue, esinqamula ku-Park Avenue. Konke okutholakala ngaphesheya kwalesi sigaba sibheka okuningi kakhulu.
Uma ungangeni emininingwaneni, i-5th Avenue ihlukaniswe nenani elikhulu lezindlu zokuhlala. Emigwaqweni yesifunda kukhona izindlu zedolobha ezizimele nezindlu zokuhlala. I-East Side ephezulu yeNew York iyathandeka yinkimbinkimbi yemininingwane yokuhlobisa engabonakala kuyo yonke indawo: kusukela emhlobheni wezingcingo zomnyango kuya kumhlobiso we-windows spans.
Ukusuka ku-5th Avenue, ungathola isakhiwo esikhulu, esakhiwe ngezitini ezibomvu. Lona yiKamelo Lama-Armory. Manje esakhiweni kukhona isakhiwo semfundo sesinye sezikhungo zemfundo zesifunda saseManhattan. I-Upper East Side igcwele izixazululo ezingavamile zokwakha. Izikwele zalo kanye nezikwele zihlotshiswe ngezinhlobonhlobo ezithokozisayo nemidwebo, umqondo wabalobi abakuzwakalayo ude wonke umuntu.
Umgwaqo oya eCentral Park ugijima eduze kwePark Avenue, elizungezwe izakhiwo eziphakeme kakhulu eNew York ezinhlangothini zombili. Ungakhathazeki ngokubukeka kwabo kwezitini eziyisisekelo. Ngaphakathi kwalezi zakhiwo kukhona izingodo. Ukuthungwa, izindonga nokufakwe kwenziwe ngamapulangwe wemvelo, kodwa uhlangothi lwangaphandle lwezakhiwo lenziwe ngezitini. Lona ubuchwepheshe bokwakhiwa, okwakusetshenziselwa ama-thirties eMelika.
Amafulethi amaningi nezindlu akuzona abantu ngabanye, kodwa okuthiwa ama-cooperatives. Wonke amalungu obambiswano anelungelo lokuvota ekudayiseni izindlu. Lokhu kusho ukuthi ukuthenga indlu e-East Side, ngaphandle kokubhalisa ukwesekwa kwabahlali bakudala, ngeke kusebenze.
Emaphethelweni esifundeni kukhona umfula omncane wedolobheni, ogwini lapho izakhiwo eziningi ezithakazelisayo zigxila khona. Isibonelo, isonto loZiqu-zintathu Ongcwele. Ngasemuva, uMfula u-East uqala, ngaphezu kwalokho kunepaki elincane elibizwa nge-K. Schulz.
Ngaphandle, le ngxenye ye-East Side ibheka kakhulu empofu. Yiqiniso, leli qiniso alikhathazi ummeli waseNew York, ogama lakhe lihlala kwenye yezitaladi zalo. Indlu yakhe iseduze nendawo epaki. Emaminithini ambalwa ngezinyawo, i-skeleton emhlophe yeqhwa le-Emmanu El Temple imile. Lokhu cishe kuyinhlangano enkulu kunazo zonke emhlabeni!
Izinyathelo ezimbalwa eziseduze yi-zoo, equkethe izilwane ezincane, kuhlanganise nekoloni enkulu yama-squirrels. Ekuphumeni okuvela epakini ungabona ukufakwa okukhanyayo ngesimo senqwaba yamakhoyili anezintambo.
Lezi Aries somlilo. Amatshe-nama mascots ngabo
Ka-Adamu Apple: ukubuyekezwa. apula sika Adamu: ekwelapheni amalunga omzimba